Global Voices teny Malagasy » ‘Atsaharo ny famonoana anay vehivavy’ — fanentanana vaovao manohitra ny herisetra an-tokantrano ao Angola · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 04 Janoary 2019 5:22 GMT 1	 · Mpanoratra Simão Hossi Nandika (en) i Liam Anderson, Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Mainty, Angola, Fanoherana, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Tanora, Vehivavy sy Miralenta
Fihetsiketsehana tao Luanda, Angola, nampiasa ny tenirohy #Paremdematarasmulheres amin'ny teny Portiogey, na ‘Atsaharo ny famonoana vehivavy’, Sarin'i Simão Hossi, nahazoana alalana.
Raha hita faty  tao an-tranony ilay mpisolovava 26 taona, Carolina Joaquim de Sousa da Silva tamin'ny 3 Desambra 2018, niaiky ny heloka vitany ny vadiny ary notanan'ny sampan-draharahan'ny fanadihadiana heloka bevava ao Angola fantatra amin'ny hoe SIC.
Tamin'io herinandro io ihany, nisy famonoana vehivavy iray hafa notaterin'ny Angola Public Television izay nilaza fa tovovavy iray no voalaza fa notsindromin'ny sipany taloha tamin'ny antsy.
Mahatonga ireo vehivavy Angoley ho malina ireo tranga heloka bevava mahery vaika ireo ary nitarika fanentanana vaovao hanohitra ny herisetra an-tokantrano antsoina hoe “Atsaharo ny Famonoana Vehivavy “, nokarakarain'ny fikambanana Ondjango, fikambanam-behivavy tsy miankina amin'ny fanjakana. Amin'ny fampiasana ny Facebook izay fitaovam-pifandraisana lehibe ampiasain'izy ireo, ny tanjon'izy ireo dia ny hanentana manoloana ny herisetra mihatra amin'ny vehivavy ao Angola:
Andro sarotra tato ho ato. Raha ny marina, dia ho antsika vehivavy, maro ireo andro sarotra sy mampalahelo satria mbola miaina anaty toe-javatra iray isika, izay amin'ny lafiny iray, ialàna tsiny foana ny karazana herisetra rehetra atrehantsika. Ary tao anatin'ny andro vitsivitsy indrindra indrindra, dia vao mainka nampalahelo ny niatrika ireo fanehoan-kevitra izay tonga taorian'ny raharaha Carolina …
Tena misy ny herisetra mihatra amin'ny vehivavy, tena misy tokoa. Tsy zavatra ao an-dohan'ireo feminista izany, tsy zava-poronina na kabary tsy misy dikany: FA TENA MISY IZANY! Indrisy fa manampy ireo antontanisa fotsiny i Carolina, maro ireo tranga hafa talohan'izany izay nisarika ny sain'ny besinimaro ary misy tranga an'arivony maro hafa izay tsy nahataitra ny sain'ny besinimaro. Olana iray hita eo an-tokonam-baravarana, eo anoloan'ny masontsika izany. Ary olana iray mampiseho ny fifandraisana eo amin'ny mpivady na hafa – olana ara-drafitra.
Misy ny rafitra izay mandidy sy mametraka ny vehivavy amin'ny andraikitra ho olom-pehezina, ka mahatonga azy ireo ho mora lasibatry ny herisetra rehetra isan-karazany sy amin'ny ambaratonga rehetra. Ity rafitra fanjakazakan'ny lehilahy izay manaloka antsika ity sy maro no mandà ny fisiany — ary tsy hoe tsy hita maso izany — no manao izany: manimba sy mamotika ny fiainan'ny vehivavy ary MAMONO!
Isika, vehivavy tsirairay, ary koa amin'ny maha-fiarahamonina, dia hanohy hihiaka hoe ‘atsaharo ny famonoana anay’ sy ny ‘fanimbàna ny maha-olona anay’.
Mila lalàna izay miaro anay izahay ary tena azo ampiharina, mila politikam-panjakana mitondra ny fanajana ny maha-olona anay ao anaty adihevitra sy ny andrim-panjakana izahay. Mila fiarahamonina izay tsy atahoranay ny mivoaka eny an-dalambe! Hanohy hitaky fiarahamonina ahafahanay manana ny fahalalahanay hisy, hahatsapa, handehandeha sy hihevitra araka ny tianay izahay.
Hanohy hitaky fiarahamonina ahafahanay miaina anaty filaminana izahay.
Mandritra izany, niteraka fanehoan-kevitra manohitra avy amin'ireo lehilahy sasantsasany ny fanentanana, izay nahita fanamarinana momba ny firongatry ny herisetra amin'ny vehivavy. Ny fanentanan-dry zareo dia antsoina hoe “Atsaharo ny Famadihana anay” ary hevero fa antony iray mahatonga ny herisetra an-tokantrano mihatra amin'ny vehivavy ny famadihana anay lehilahy. Na dia tsy nahasarika loatra aza ny fanentanan'izy ireo, dia niteny mihitsy ilay mpiangaly rap Angoley, Gil Slows Allen Russel  hoe:
Atsaharo ny mamadika ny hafa, miangavy, tsy mila fampirafesana intsony. Hiaka mafy izany, ry vehivavy, rehefa tsy tia anay intsony ianareo, dia mangataha fisaraham-panambadiana alohan'ny hamadihana anay, mandehana.
Nitsikera ity fomba fijery ity ilay sôsiôlojista Mbangula Kemba , manamafy fa tsy tokony vahana amin'ny herisetra ireo olana ara-panambadiana.
Nankatoa ny lalàna momba ny herisetra an-tokantrano fantatra amin'ny hoe 25/11 tamin'ny taona 2011 i Angola izay manameloka ny hetsika herisetra rehetra an-tokantrano ho toy ny heloka bevava. Na izany aza, maivana ny sazy amin'ity lalàna ity, izay roa ka hatramin'ny valo taona an-tranomaizina.
Niantso ho amin'ny fampiharana tsara ny lalàna tao amin'ny media sosialy i Sizaltina Cutaia , mpikatroka sady feminista any Angola, izay malaza amin'ny asany momba ny zon'ny vehivavy, :
Tsy ampy ny mampitombo ny sazy, Rtoa filoha lefitry ny MPLA [Hetsi-bahoaka ho an'ny Fanafahana an'i Angola], ilaina ny famoronan'ny fanjakana fepetra ara-drafitra hiadiana amin'ny herisetra — mila ampiharina ny fanomezan-toky tamin'ny taona 2007 tamin'ny alalan'ny fankatoavana ny arofenitr'i Maputo. Ankoatra izany, ilaina ny mamorona rafitra hanampiana ireo niharam-boina ary mametraka lalàna fanampiny izay miantoka ny fanatanterahana ny zon'ny vehivavy. Anisan'izany ny lalàna rehetra momba ny zo ara-nofo sy fananahan'ny vehivavy.
Tsy ilaina ny manao kabary manohitra ny herisetra an-tokantrano ary avy eo manohana politika izay manome alalana ny inspektera sy ny polisy hiherisetra amin'ny vehivavy isan'andro eny an-dalambe, mifanohitra izany!
Tsy ilaina ny manao kabary manohitra ny herisetra an-tokantrano ary avy eo manohana ny tetibolam-panjakana izay tsy miaro ny tolotra ara-tsosialy, ny hakelin'ny famatsiam-bola izay fantatsika rehetra fa misy fiantraikany ratsy amin'ny fiainan'ny vehivavy. Ilaina ny manome lanja ireo kabary miaraka amin'ny hetsika mivaingana. Ataovy eo amin'ny vavanao ny volanao.
Namaly ireo izay manohy mamporisika ny fifandraisana mahery setra i Cecília Kitombé , vehivavy feminista:
Ny sasany amin'ireo izay … manizingizina fa tafahoatra loatra [ ny manohitra ny herisetra ao an-tokantrano], dia mitovy amin'ireo izay manoro hevitra ny zanakavavy, ny anabavy sy ny zanak'olo-mpiray tam-po mba hijanona amin'ny fifandraisana feno fanararaotaona, eo ambanin'ny filazàna fa ao anatin'ny resaky ny mpivady, tsy mahazo mitsabaka ianao, ary tahaka izany koa ireo hafa milaza aminao mba hanohy, ny fiainan'ny mpivady … misy koa ireo mieritreritra fa afaka manao ny zava-drehetra ny vehivavy, fa tsy tokony hanadino na oviana na oviana ny “anjara asany”…
Atsaharo ny famonoana anay!!!
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/01/04/132472/
 hita faty: https://club-k.net/index.php?option=com_content&view=article&id=34214:marido-da-advogada-conta-que-a-matou-com-um-bloco-na-cabeca&catid=2:sociedade&lang=pt&Itemid=1069
 Atsaharo ny Famonoana Vehivavy: https://www.ondjangofeminista.com/ondjango/2018/12/11/parem-de-matar-as-mulheres